शिक्षक बन्न इसाई नै हुनुपर्ने ? विज्ञापन विवादमा परेपछि छानबिन सुरु – Rastriyapatrika
शिक्षक बन्न इसाई नै हुनुपर्ने ? विज्ञापन विवादमा परेपछि छानबिन सुरु
ललितपुर : गैरसरकारी संस्था ‘टिच नेपाल’ ले गरेको शिक्षकको आवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापन विवादमा परेपछि छानबिन सुरु भएको छ।संस्थाले विज्ञापनमा एक प्रशिक्षार्थी शिक्षकको आवेदन माग्दै आवेदक इसाई परिवारको हुनुपर्ने, इसाई कलेजमा पढेको र चर्चको सिफारिस चाहिनेलगायत सर्त राखेको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा परेको छ।
ललितपुरका सहायक सीडीओ डमरु निरौलाले संस्थासँग सम्पूर्ण विवरण मागेको र अनुसन्धान भइरहेको बताए। उनले भने, ‘संस्थाले हालसम्म के कस्ता काम ग¥यो, कसरी सञ्चालित भइरहेको छ, आम्दानीको स्रोत के होलगायत अनुसन्धान भइरहेको छ।’ संस्था ललितपुरको भनिमण्डलमा ५ वर्षयता सञ्चालित छ। उनका अनुसार संस्थाले मागेबमोजिम केही कागजपत्र बुझाए पनि अझै बुझाइ सकेको छैन। उनले भने, ‘छानबिनको प्रतिवेदन नआई केही भन्न सकिन्न, अहिले हामी प्रारम्भिक अनुसन्धानमा छौं।’ उनले ५ वर्षमा भएका काम हेरिने बताए।
संस्थाले बालबालिकालाई सकारात्मक वातावरणमा सिकाउने, प्रेमपूर्वक कसरीे, पढाउने तालिम शिक्षकलाई दिँदै आएको बताए। उनले भने, ‘बालबालिकालाई बाइबलले के भन्छ पनि सिकाउँछांै।’ तर धर्म प्रचारमा नलागेको र संस्थामा कुनै पनि विदेशी आबद्ध नभएको दाबी गरे। संस्थाका कार्यक्रम हेर्दा देशका अनेकौं स्थानका चर्चमा कार्यक्रम गरेको देखिएको छ।
नितु घले / Annapurna Post